ကာလသုံးပါးမှလွတ်သည် | Dr Chit Nge (Philosophy) Ph.D, London
← နိဗ္ဗာန်နီးသလား ???
ကာလသုံးပါးမှလွတ်သည် ဆိုသောစကားသည် လွန်စွာစိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းသည်။ အတိတ်မှ လွတ်လိုက လွတ်နိုင်အောင် ကြိုးစားနိုင်ခွင့် ရှိပါသည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် —
အတိတ်သို့ ပြန်မတွေးနှင့် – ဤကိစ္စသည်ပင်လျှင် လွန်စွာခက်ပါသည်။ သို့သော် အတိတ်ကို ပြန်မတွေးနှင့် ဖြစ်လိုက ဖြစ်နိုင်သည်။
အနာဂတ်မှ လွတ်သည်ဟုဆိုရာ၌ အတိတ်ကိုလည်း မခေါ်နှင့် အနာဂတ်ကိုလည်း မမျှော်နှင့် ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ သို့သော် ခက်ပါသည်။
ထို့ထက် အခက်ဆုံးမှာ ပစ္စုပ္ပန်ကာလမှ လွတ်မြောက်ရန်ပင် ဖြစ်သည်။ ပစ္စုပ္ပန်ကာလ၌ လွတ်မြောက်ရန် မလွယ်ချေ- အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် ပစ္စုပ္ပန်သည် ဖြစ်၍ ဖြစ်၍ လာသည်။ ထို့ကြောင့် လွတ်မြောက်ရန် မလွယ်ချေ။ ထို မလွယ်သော ကိစ္စအား လွတ်မြောက်သည်ဟု ဆိုသဖြင့် နိဗ္ဗာန်သည် လွန်စွာ အံသြဖွယ်ရာ ကောင်းသည်။
လွတ်မြောက်သည် ဆိုသည်မှာ ပစ္စုပ္ပန်ရုပ်နာမ်ကို ချုပ်အောင်ရှုသဖြင့် ရုပ်နာမ် ဖြစ်ပျက်ဆုံးသောအခါ “ခန္ဓာ့နိယောဓေါ နိဗ္ဗာနံ” ဟူ၍ နိဗ္ဗာန် မျက်မှောက်ပြုကာ ရုပ်နာမ်နှင့် မပတ်သက်တော့ချေ။ ရုပ်နာမ်နှင့် မပတ်သက်လျှင် အတိတ်လည်းမရှိ၊ အနာဂတ်လည်းမရှိ၊ ပစ္စုပ္ပန်လည်း မရှိဘဲ ရုပ်နာမ်မှ အားလုံး လွတ်မြောက်သွားသည်။ ဉာဏ်ပညာဖြင့် မဂ်ဉာဏ် ဖိုလ်ဉာဏ်ဖြင့် နိဗ္ဗာန်ကို မျက်မှောက်ပြုခြင်း ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ကာလသုံးပါးမှ လွတ်မြောက်သည် ဆိုသောစကားသည် လွန်စွာ စိတ်ဝင်စားဖွယ် ကောင်းသည်။
နိဗ္ဗာန်၌ ရုပ်နာမ်မရှိချေ – “ခန္ဓာ့နိယောဓေါ နိဗ္ဗာနံ” ဟူသော အဆိုရှိသည်။ အမြော်အမြင် မရှိသော ဗဟုသုတ မရှိသော ရွှေတံဆိပ်ရ အဘိဓမ္မာဆရာမျိုးကသာလျှင် နိဗ္ဗာန်၌ ချမ်းသာသော စိတ်ကလေးဟု စာတစ်ဆောင် ပေတစ်ဖွဲ့အဖြစ် တင်ပြခဲ့ဖူးခြင်း ဖြစ်သည်။ လွန်စွာ မှားယွင်းသော အယူအဆ ဖြစ်သည်။ နောက်နှောင်းသူငါများ အဘိဓမ္မာလိုက်စားလျှင် လမ်းလွှဲသို့ ညွှန်ရာကျသည်။ အဘိဓမ္မာသမားများ ထိုကဲ့သို့သော အမှားလမ်းညွှန်မှုအား အမှန်ဟုထင်လျှင် လဲသေစရာကောင်းသည်။ မြတ်စွာဘုရားတရား ကြည်ညို၍လိုက်ပါသည် အမှားအယွင်းတွေ အသင်ခံရသည် ဆိုသည်မှာ လဲသေဖို့ပင်ကောင်းသည်။
ယခုအခါ သိပ္ပံပညာက တွင်းမည်းကြီးများရှိရာ ထိုတွင်းမည်းကြီးများ (Black Holes) ထဲသို့ကျလျှင် အချိန်မှလွတ်မြောက်သည်ဟု သုံးလာကြသည်။ (End of the Time) ဟု သရုပ်ဖော်ကြသည်။ တွင်းမည်းကြီးထဲသို့ ကျသောအခါ အချိန်၏ အဆုံးကို ရောက်ခြင်းဆိုသည်မှာ ၎င်း၌ ရုပ်နာမ် ပျက်စီးသွားသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ သို့သော် ရုပ်နာမ် ပျက်စီးသော်လည်း တစ်နေရာရာ၌ ရုပ်နာမ်သည် ပြန်ပေါ်ပေလိမ့်မည်။ ဒီဘဝ ပျက်စီးရုံနှင့် မရချေ။ နိဗ္ဗာန်ဆိုသည်မှာ ဒီဘဝ အနိစ္စဖြစ်သွားရုံနှင့်မရချေ – ရုပ်နာမ်နှင့် ပတ်သက်၍ ဘာတစ်ခုမှ နောက်ထပ်တဖန် ထပ်မဖြစ်တော့မှသာလျှင် ရနိုင်သည်။ “ခန္ဓာ့နိယောဓေါ နိဗ္ဗာနံ” ဖြစ်သည်။
ထို့ကြောင့် အချို့က နိဗ္ဗာန်နှင့် တွင်းမည်းကြီးများ နှိုင်းယှဉ်လိုကြသော်လည်း အမှန်တော့မူ ပြည့်ပြည့်ဝဝ နှိုင်းယှဉ်ရန် မဖြစ်နိုင်ချေ။ နိဗ္ဗာန်၌ ဝင်စား၍ ရသည်၊ နိဗ္ဗာန်၌ဂုဏ်ရည်တွေရှိသည်။ ထိုဂုဏ်ရည်များကို မဂ်ဉာဏ် ဖိုလ်ဉာဏ်များက ထိုးထွင်းဆင်ခြင် ဉာဏ်သက်ဝင်နိုင်ကြောင်း သတင်းကောင်း ပေးအပ်ပါသည်။
Tags: Buddhism, Myanmar Posts, နိဗ္ဗာန်, ဗုဒ္ဓဘာသာ, မဂ်ဉာဏ် ဖိုလ်ဉာဏ်, အနိစ္စ
This entry was posted in Buddhism and tagged Buddhism, Myanmar Posts, နိဗ္ဗာန်, ဗုဒ္ဓဘာသာ, မဂ်ဉာဏ် ဖိုလ်ဉာဏ်, အနိစ္စ. Bookmark the permalink.